Vula iNdawo embindini weziko lembali, indawo yokuphosa ilitye ukusuka eDuomo nasePiazza Sepolcro.
ICasa Adriana ikuvumela ukuba uhlale imizuzu nje embalwa ukusuka kwindawo yabahambi ngeenyawo, intliziyo yesixeko saseBagheria, egcwele iivenkile, ii-pubs, iindawo zokutyela kunye neebhari zembali.
Ifanelekile isibini okanye abahlobo ababini abandwendwela iPalermo kunye nendawo eyingqongileyo.
Zixhotyiswe izitya kunye neelinen. Ixhotyiswe ngazo zonke izinto ezithuthuzelayo, kuquka i-WIFI yasimahla, iTV, ukufudumeza kunye ne-air conditioning. Ukukhululeka kwendawo yokupaka yasimahla kufutshane nomnyango.
Indawo enikezelwa nguCasa Adriana ifanelekile kubahlobo ababini okanye isibini, nokuba sikhatshwa ngumntwana omncinci kakhulu, echaza ukuba sikhona ukuze sikubonelele ngebhedi ekhethekileyo.
Loft inendawo yokuhlala ebanzi, enekhitshi, isofa kunye nendawo yeTV, apho unokonwaba khona ixesha lokuphumla.
Indlu ayikonwabeli nje indawo esasazwe kakuhle kwaye ihlukaniswe ngokwengqiqo, kodwa kunye nefestile enkulu ekhanyisa zombini indawo yokuhlala kunye nendawo yokulala.
Nangona iyindawo evulekileyo, iindawo zeflethi zihlulwe kakuhle omnye komnye, ukwenzela ukuba indawo yokuhlala ikhululekile ngokusemandleni.
Igumbi lokuhlambela likhulu ngokwaneleyo kwaye lixhotyiswe ngefestile encinci evumela ukungena komoya ngokuthe ngqo.
ICasa Adriana yindawo ebalulekileyo, kodwa leyo ayiphosi nto kwiindwendwe zayo.
Ixhotyiswe ngayo yonke induduzo: i-wifi yamahhala onokufikelela kuyo ngokukhululekileyo ukusuka kwisitshixo esikhethekileyo sothungelwano esibhaliswe ngasemva kwimodem; Isidlo esitsha kraca, esilungele abahambi abangafuniyo ukuncama ukutya kwasemini okukhawulezayo nangexabiso eliphantsi ekhaya ngaphambi kokuba baye kufumanisa indawo yasePalermo; I-sofa yokulala emva kwemini kunye ne-flat screen cable TV.
Kufanelekile zombini ukuhlala okufutshane kwabo badlula nje ukhenketho kwiNgingqi yaseSicilian, kunye neendawo zokumisa ixesha elide, emva kokuba wenze ukuba kubekho i-wardrobe ekhululekile kunye ne-hanger yedyasi kwindawo yokulala.
Le ndawo, nangona isembindini wezitrato ze "Old Bagheria", iyakonwabela ukugcwala kwamanzi kunye nokukhululeka kwendawo yokupaka ezitalatweni, kwindawo engaxhomekeke kwintlawulo yemigca eluhlaza okanye nayiphi na enye ireyithi yeyure.
Isithili, esele sonwabele ukubonakala njengoko sasikwiziko lembali, sithathe ukubaluleka ngakumbi ngokunyuka kobomi basebusuku baseBagherese.
Amanyathelo ambalwa ukusuka ngeenyawo, enyanisweni, kwiminyaka ethile ngoku, indawo yokuzonwabisa yesixeko igxininiswe, ilungele abo bafuna ukugqiba usuku ngebhiya, isiselo, kodwa kunye nehamburger, ipizza egqwesileyo. okanye, kwakhona, izitya ezithile zokutya street Sicilia.
Ukuphendula ngokukhawuleza nge-bnb yomoya okanye i-sms! Isimo seCasa Adriana kukuba: ubumfihlo buphelele kunye nemfihlo kodwa ungenelelo olukhawulezileyo nanini na kukho imfuneko. Siyakukhathalela ukuya kwangoko kwisiza okanye sikuthumelele umntu oza kukunceda xa kukho iingxaki ezinokuthi zenzeke endlwini.
Ukuphendula ngokukhawuleza nge-bnb yomoya okanye i-sms! Isimo seCasa Adriana kukuba: ubumfihlo buphelele kunye nemfihlo kodwa ungenelelo olukhawulezileyo nanini na kukho imfuneko.…